Nezvedu - Shijiazhuang Mets Machinery Co., Ltd.
Shijiazhuang Mets Machinery Co, Ltd.(kuno kunzi kunzi Mets Machinery) ikambani yepasirese inoshanda mukugadzira uye sevhisi yemapombi eslurry. Hofisi yemusoro iri munzvimbo yepamusorosoro yekuvandudza nzvimbo, Shijiazhuang Guta, Hebei Prov.,. Mets Machinery inotarisira Hebei Hanchang Minerals Co., Ltd. uye akati wandei epasi rese.
Mets Machinery yakavambwa muna2008, kambani inogara ichifunga nezvehunhu hwechigadzirwa, kutsvagisa nekusimudzira senzira yayo yehupenyu. 30% vagadziri vehunyanzvi pakati pevangangoita zana maChinese uye vekunze vashandi mukambani. Mets Machinery yakadyara mari inodarika mamirioni zana emamiriyoni euan muhunyanzvi, kuongorora kwehunhu uye kugadzirisa maitiro ekugadzira mukati memakore gumi apfuura, izvo zvinoita kuti nyika ive nemhando yepamusoro yezvigadzirwa zvedu.
Yedu yebasa basa nderekuve iyo yekuparadzanisa zvikamu nyanzvi yevatengi vedu. Isu tinogara tichitevedzera mutemo wevatengi. Isu tanga tichivaka matura uye nzvimbo dzekushandira munzvimbo huru dzenyika dzezvicherwa, tichitora zvinhu zvekutengesa zvakadzika.
Zvakare Mets michina inoshingairira inovaka yakanyanya kukwana zvikamu zvekuchengetera uye inonyanya kuita basa mushure-rekutengesa timu timu. Iye zvino imba yekuchengetera uye musangano muPerth, Australia neLaos muSoutheast Asia zvakaiswa mukushanda. Mushure mekutengesa-nzvimbo dzekutengesa kuMiddle East, iyo Commonwealth yenyika dzakazvimiririra, South America nepakati peAfrica zviri kurongwa nekuvakwa nhanho nhanho.
Isu tinoomerera pakupa zvakavimbika uye zvemhando yepamusoro zvishongedzo zvevatengi munguva ipfupi.
Chinangwa chaMetslurry ndechekuti "KUVA YAKO ZVINHU ZVINOKOSHA ZVINOGONESESWA NEMUSANGANO".
Mets yakazvipira kupa mhando yepamusoro yezvigadzirwa zvemigodhi uye OEM basa kumigodhi minda. Isu tinoomerera pakupa kumagumo mushandisi akavimbika mhando zvigadzirwa mupfupi lead nguva.
Kambani yedu inonamatira kune "vanhu-vanotungamira" manejimendi pfungwa, isu tinogara tichironga dzakasiyana nzira dzekuvaraidza-ational zviitiko, kugadzirisa vashandi vemuviri kugwinya, kunatsiridza hupenyu hwevashandi, kunoedza kwese kurega vashandi mukambani kuti vawane kunzwa kwe "kumba" .
Kambani yedu inogara ichiomerera kune "hunyanzvi, hwekuita, hunoshanda, hunyanzvi" bhizinesi uzivi, ne '' zvigadzirwa zvemhando yepamusoro '', '' mutengo wemakwikwi '' uye '' panguva yekuendesa '' kusangana neakawanda-chikamu chehunyanzvi zvinodiwa yevatengi vakasiyana.
Pasi rose subsidiaries
Pakutanga kwekugadzwa kwayo, chirongwa chebudiriro chekutsvaga kwakazvimirira nekusimudzira uye kugadzira chiratidzo chenyika chakaumbwa.
Kuzvipira uye kutsungirira zvinotibvumira kuunganidza tekinoroji uye ruzivo uye nekuisa hwaro hwebudiriro.
Kuwedzera kwechiyero chekugadzira kuri chete nekuti isu tinogara tichitevedzera emhando yepamusoro mhando.
Gonesa michina, tekinoroji uye manejimendi sisitimu kuti ienderane nekuwedzera kwechikero.
Kuwedzera iyo fekitori, kuwedzera huwandu hwesimba michina, uye kugadzirisa chiyero uye mhando.
Inoenderera mberi budiriro mukushandisa kutsva, ichigadzira kukosha kwevatengi, uye ichienda kune ramangwana rine hunyanzvi.